Hay’ada WFP oo dhaqaale dalbatay
9 Feb 9, 2013 - 9:14:20 AM
Barnaamijka Cunada Aduunka ee WFP ayaa codsaday dhaqaale gaaraya $57 oo ay sheegeen inay ku caawinayaan 1.6 Million qof oo Somali ah, kuwaas oo u baahan gargaar deg-deg ah.
Afhayeenka WFP Elizabeth Byrs ayaa sheegtay in hay’adoodu ay gargaar ka bilowday Degmada Kismaayo oo ay Afar sano ka hor Al-shabaab u diiday inay ka shaqeeyaan.
“Waxaan bilownay inaan caawino dadka jilicsan oo Kismaayo ku nool, inta badan dadkaas waa caruur ay nafaqo-daro hayso” ayay tiri Ms. Byrs oo intaa raacisay inay u qorsheysan inay ka fuliyaan Kismaayo howlo lagu dhisyo goobo dadka lagu gargaaro, isbitaalo iyo iskuulo ay caruurtu wax ku bartaan.
Sarkaalada u hadashay WFP waxay sheegtay in dadka u baahan gargaarka ay intooda badan ku nool yihiin goobaha ay weli Al-shabaab ka taliso, iyadoo sheegtay inay ka go’an tahay inay dadka baahan ku caawiso meel walba oo ay joogaan.
“Baahida gargaar ee Somalia hoos ayay uga dhacday sidii ay ahayd sanadkii 2011, markaasoo dalka ay ka dilaaceen abaaro sababay macluul” ayay Byrs ku sheegtay warbin ay hay’adu soo saartay shalay oo Jimco ahayd.
Al-shabaab ayaa Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bixiya ka cayrisay Deegaanada Koonfurta iyo Bartamaha Somalia oo gacanta ay ku hayeen sanadihii lasoo dhaafay, inkastoo deegaanadaas intooda badan laga saaray.
Warbixinta hay’ada ay ku sheegtay inay ku caawinayso 1.6 million Somali ah oo gargaar bani’aadam u baahan ayaa imaanaya iyadoo dhawaan ay Somali badan oo Qoxooti ahaa go’aansadeen inay kasoo laabtaan dalka Kenya.
Ciid wanaagsan umadda Somaliyed
Gaas oo maxabiis cafis u fidiyay
Muungab oo dil ka bad baaday